Shiinaha oo milatari ahaan niyad jebiyay Maraykanka kadib markii - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Shiinaha oo milatari ahaan niyad jebiyay Maraykanka kadib markii
Shiinaha oo Maraykanka sanadihii u dambeeyay ku garaacay dhinaca isgaarsiinta ayaa si xun u niyad jebiyay milatariga iyo awooda Maraykanka kadib markii ay ku guulaysteen inay tijaabiyaan gantaalka casri ah.
Gantaalkan oo ah nooc welli Marsaykanku la tacaalayo inuu keeno xirfadiisa ayaa Maraykanka ku gaaraya daqiiqado isagoo maraya jooga hoose ee cirka. Waxa gantaalkan noocana hadda haysta keliya Ruushka.
Sanadihii u dambeeyay ayaa Ruushku soo saaray gantaal ayna haba yaraatee difaaca Maraykanku soo ridi karin. Gantaalkan ayaa inta uu hawada ku jiro dhowr jeer is rogaya marna hoos u degaya marna kor.
Difaaca Maraykanka nooca ay ku faanaan ayaa soo ridi kara keliya gantaal toos u socda. Gantaalka Shiinuhu hadda ku guulaystey ee xawaarihiisa laga yaabay ayaa xitaa soo ridi kara dayac gacmeedka isgaarsiinta ee saaran hawada soke.
Shiinaha ayaa isagu bilaabay dhamaystirka dayac gacmeedkiisa isgaarsiinta halkaas oo shalay uu u direy laba duuliye gacmeed.